gmail စစ်လို့မရပါ... - MYSTERY ZILLION
www.gmail.com ၀င်လိုက်တိုင်း loading ပဲဖြစ်နေတယ်..... ဘယ်လိုမှ sign in page မကျဘူးဖြစ်နေတယ်... how to do? glite ကပဲ၀င်လို့ရတယ်...
တစ်ကယ်လို့ gilite သုံးချင်ရင်တော့
ကိုသုံးပေါ့ ... MZ ရဲ့ GLITE ပါ ..စိတ်သာချ ...
Glite ကို ဘာလို့မသုံးခိုင်းတာလဲဗျ....
ကိုသုံးပေါ့ ... MZ ရဲ့ GLITE ပါ ..စိတ်သာချ ... :d
reli scare to use:P
ကော်နက်ရှင်မကောင်းတဲ့အခါမျိုးမှာလည်း loading ကကြာနေတတ်ပါတယ်..
အဲ့ဒီအခါမျိုးဆို HTML view နဲ့ကြည့်လို့ရတတ်တယ်လေ..
loading ရဲ့ အောက်ဆုံးနားမှာ (for slow connection) ဆိုပြီးရှိပါတယ်..
ကိုညရေ..လိပ်မလေးက ကော်နက်ရှင်တအားမကောင်းတာမျိုးဆိုရင် glite ကသုံးရတာ နည်းနည်းမြန်လို့လေ..
အဲ့ဒါသုံးမိဖူးတာပေါ့နော်.. glite ကဘာဖြစ်လို့လဲ ဟင် :43:
Glite သုံးချင်ရင်လေ... www.shinesnow.com ကို သုံးကြည့်ပါလား..ကျနော်တို့လည်း
Gmail ၀င်လို့မရရင်...အဲဒါလေးသုံးတယ်...attach တွဲလို့တော့မကောင်းဘူးပေ့ါ...
Glite သုံးချင်ရင်လေ... http://www.shinesnow.com ကို သုံးကြည့်ပါလား..ကျနော်တို့လည်း
IE နဲ့ စစ်တော့ရတယ်ဗျ..
Basic HTML ရွေးဖို့ Signin Page ကိုမကျတာပါ...
address bar မှာ https://www.gmail.com လို့ s တစ်လုံးထည့်ပြီး ၀င်ကြည့်လိုက်ပါလား။ (https /):D
ကျွန်တော်သေချာတော့မပြောတတ်ဘူးဗျ။ glite နဲ့ သုံးရင် gmail password ပါသွားနိုင်ပါတယ်(ထင်တာပဲ) glite နဲ့ မဖြစ်မနေသုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကို ထွက်ပေါက်ပေးတဲ့ MZ glite သုံးပေါ့။ စိတ်ချရပါတယ် စေတန့်ကို ယုံပါတယ်။
မဟုတ်သေးဘူး ကို K နိုင်ရ ...:68:
https:// က Access Denied ဖြစ်မှသုံးတာမလား...(Just for Dial-Up User)
ကျွန်တော့ ADSL (203.81.72.200)India က Access Denied မဖြစ်ဘူး။
IE Browser နဲ့ရတယ်...
But, it has the vulnerabilities and i showed it in
for the image, it's here
you also can view the image from this link